Muuse Biixi Oo Dalbaday Xil Ka Qaadista Mid Kamida Wasiiradda Ugu Awooda Badan Xukumada Siilaanyo .
Thursday October 13, 2016 - 19:15:42 in Wararka by Halgan News
Hargeysa(HGN)Guddoomiyaha xisbiga talada dalka haya ee KULMIYE ahna murashaxa madaxweynaha ee xisbigaasi ayaa madaxweyne Siilaanyo ka codsaday inuu xilka ka qaado qaar kamid ah golaha Wasiiradda Somaliland ee xukumada Siilaanyo.
Guddoomiye Muuse Biixi ayaa madaxweyne Siilaanyo ka dalbaday inuu xilka wasiirnimo ka qaado wasiirka maaliyadda Somaliland Sam Sam Cabdi Aadam , isaga oo kaga cawday lacagta xisbiga uu u adeegsan lahaa oo aanay bixin .
Waxaanay warar hoose oo ay heshay shabakada wararka ee Halgannews sheegayaan in uu madaxweynuhu ka dhego adaygay dalabkaasi, kaas oo keenay inuu ka cadhoodo Murashax Muuse Biixi Cabdi.
Murashaxa ayay tahay markii labaad ee uu dalabkaasi oo kale u gudbiyo madaxweynaha Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ,isaga oo hore ugu gudbiyey dalab ahaa inuu xilka wasiirnimo ka qaado Wasiiradda maaliyadda iyo Xanaanada Xoolaha Sam Sam Cabdi Aadam Iyo Cabdilaahi Maxamed Daahir (Cukuse) oo waqtigaasi ahaa mid kazoo horjeeday murashaxnimada madaxweyne ee Muuse Biixi Cabdi.
Muuse Biixi ayaa la filayaa inuu dhowaan soo gaadho magaalada Hargeysa , isaga oo waqtigan ku sugan magaalada London ee cariga Ingiriiska, isaga oo safarkii madaxweynaha kamid ahaa waftigii la socday.
Ilaa hadda lama sheegi karo sida uu dalabkaasi madaxweyne Siilaanyo ka yeeli doono, iyada oo haddii uu xilka wasiirnimo ka qaado madaxweyne Siilaanyo Wasiirka maaliyadda Sam Sam Cabdi Aadam ay keeni karto inuu mar kale kala jabo xisbiga KULMIYE , sidoo kalena ay meesha ka baxdo taageerada badan ee ay ku lee dahay xisbiga Sam Sam Cabdi Aadam.